Idumela yi-Authority's Dark Shadow | Martech Zone
ULwesihlanu, February 13, 2009 NgoMgqibelo, Januwari 8, 2011 Douglas Karr
Izindaba zigcwele ezinye izindaba ezinhle zesintu muva nje:
Alex Rodriguez kuvuma ama-steroids (ngokumangazayo kukhishiwe ekhasini lezindaba le-MLB.com le-AROD)
Michael Phelps thwebula ibhodwe elibhemayo. Ngemuva kwalokho ulahlekelwe yisivumelwano esikhulu semvume nabakwaKellogg.
Ngisho noBarack Obama ube namasonto anzima ambalwa, ngizama ukuthola amalungu ekhabhinethi futhi ngiphusha iphakethe lezikhuthazo lokho kudumile.
Kunokujwayelekile. Ngamunye walaba bantu wayephezulu emhlabeni. Kwakuyiziphathimandla zokugcina - akekho noyedwa owayengasondela ukuziphonsela inselelo.
Igunya lingenye yalezi zinto umuntu angazizuza ngaphandle kwedumela. Bobathathu laba bantu babengabantu abavamile ngaphambi kokuba bathole igunya elingajwayelekile. Bazuze izinhloso ezazingaphezulu kakhulu kwalokho okwakubonakala kutholakala kubantu nje abafana nami nawe.
Kungakapheli unyaka, uMongameli Obama wasuka eSenator encane waya ehhovisi eliphakeme kakhulu (ngokusobala) emhlabeni. Eminyakeni eyi-10, i-AROD yakhula yaba umdlali webhola we-baseball ohamba phambili futhi okhokhelwa kakhulu. Eminyakeni engu-7, uPhelps waba yi-Olympian ehlotshiswe kakhulu emlandweni, cishe engaziwa ngaphambi kwama-Olimpiki wokugcina ama-2.
Idumela lifana nesithunzi. Ihlala ikhona njalo ihlala nawe. Ngenkathi ilanga likhanya ebusweni bakho, lisemuva kwakho futhi, mhlawumbe, ukhohliwe. Uma ungumuntu ojwayelekile, akekho onaka isithunzi sakho. Kodwa-ke, uma umile ngaphezu kwesixuku, ufaka isithunzi impela.
Kulo mhlaba lapho konke esikwenzayo kurekhodwe futhi kutholakala kuwo wonke umuntu, kuzofanele sijwayele abantu njengabantu. Akekho kithi ongenaphutha, futhi ngeke size sifinyelele ekupheleleni.
Njengoba ulwela ukwakha igunya, vele ungakhohlwa ukuthi unedumela ongalisekela.
Omunye Umthombo Wethrafikhi ku-Google Analytics?
Feb 13, 2009 ngo-10: 08 AM
"Ngenkathi ilanga likhanya ebusweni bakho, lisemuva kwakho futhi, mhlawumbe, ukhohliwe… lapho umile ngaphezu kwesixuku, wenza isithunzi impela."
Yebo… futhi nge-Internet leso sithunzi sizoba nezithameli zabantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu ngejubane lokukhanya. Kunzima kakhulu ukwenza amaphutha bese uwufihla manje. Ukusatshalaliswa kolwazi kwenzeka ngokushesha.
Feb 13, 2009 ngo-5: 28 PM
“Isimilo sifana nesihlahla nedumela njengesithunzi saso. Isithunzi yilokho esicabanga ngakho; umuthi uyinto yangempela. ” U-Abraham Lincoln
Uhambisana kahle nemicabango yakho! 😉
Feb 13, 2009 ngo-6: 13 PM
Bengicabanga ukucosha incwadi eLincoln. Eminye imibukiso ye-History Channel yangakamuva inginamathele. Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngalokhu! Angilufanele lolo hlobo lokuncoma, noma kunjalo.
Feb 14, 2009 ngo-11: 29 PM
Bobabili uMichael no-ARod babeyizinqumo ezingasile, uMongameli, njengoba enezinqumo eziningi okufanele azenze, nakanjani uzokwenza amaphutha ambalwa.